မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ ထုတ်ပြန်ချက် ၂ /၂၀၂၀
ထုတ်ပြန်ချက် ၂ /၂၀၂၀
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၃) ရက်၊ တနင်္လာနေ့
‘သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်သည့် ဂျာနယ်အဖြစ် ကြေညာခြင်း’
၁။ ၂၀၁၉ ၊ ဒီဇင်ဘာ၂၉ ရက် ထုတ်၊ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ် Vol. 1, No. 279 တွင် “ခွေးသားရေပေါ်မှာ ရေးမှတ်ထားရမယ့် ငွေကြောင့် မြန်မာပြည်အား သစ္စာဖောက်ကြသူများ” ခေါင်းစဉ်ပါ ဓာတ်ပုံနှင့် ပုံစာဖော်ပြမှုတွင် ကလေးသူငယ်များပါသော မိသားစုဓာတ်ပုံကို ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
၂။ အဆိုပါဓာတ်ပုံနှင့် ရည်ညွှန်းဆောင်းပါးတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များသည် ဆက်စပ်မှုမရှိခြင်း၊ သတင်းမီဒီယာသမားများ အတွက် ပြဌာန်းထားသည့် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကျင့်ဝတ် ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်သည် ယခင်ကလည်း အလားတူ ကျင့်ဝတ် စည်းကမ်းများကို မကြာခဏဖောက်ဖျက်ပြီး သတင်းဆောင်းပါးများ ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်ကို သတင်းမီဒီယာကောင်စီမှ စိစစ်တွေ့ရှိရသည်။
၃။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာနည်းဥပဒေ ၁၉ (ခ) အရ သူရိယနေဝန်း ဂျာနယ် တာဝန်ရှိသူအား (၉.၁.၂၀၂၀) ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကျင့်ဝတ် ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ထားကြောင်း နည်းဥပဒေ ၂၀ (ခ) အရ သတိပေးခဲ့သည်။
၄။ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်အနေဖြင့် သတင်းမီဒီယာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းမီဒီယာကောင်စီက ထုတ်ပြန်ထားသည့် ကျင့်ဝတ် ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို လေးစား လိုက်နာ ကျင့်သုံးပါမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်နောင် ထို့ကဲ့သို့ ထပ်မံကျူးလွန်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြု ခဲ့သည်။
၅။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီသည် သတင်းမီဒီယာ နည်းဥပဒေ ၂၀(ခ) “ သတင်းမီဒီယာများ၊ စာနယ်ဇင်း အသင်းအဖွဲ့များက သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ် ဖောက်ဖျက်မှုများ ရှိလာပါကအသိပေးခြင်း၊ အဆိုပါ ဖောက်ဖျက်မှုများနှင့် အငြင်းပွားမှု ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးမှု ရလဒ်များကို အများပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာခြင်း ” အရ သူရိယနေဝန်းဂျာနယ်သည် သတင်းမီဒီယာကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့သည့် သတင်းဂျာနယ် တစ်စောင်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။